Ankorondrano : Nitarika olona saika hanakorontana ry Ravalomanana -
AccueilRaharaham-pirenenaAnkorondrano : Nitarika olona saika hanakorontana ry Ravalomanana
Raha tsy voafehy dia efa raikitra ny korontana. Izay no zava-nitranga tetsy Ankorondrano nanoloana sy manodidina ilay toerana misy ny tany antsoina hoe « Soa », ilay misy ny orinasa Romanor taloha.
Raha efa nidina ifotony nanatanteraka ny fandravana ilay trano tsy ara-dalàna natsangan’ingahy Marc Ravalomanana eo amin’ny tany misy ny Romanor taloha ny tompon’andraikitra avy amin’ny Fanjakana tamin’ny alalan’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany, ary ny Fampitaovana, ny alatsinainy 5 febroary teo, dia niverina nanamboatra izany indray ry Ravalomanana omaly. Noho izay indrindra, dia nidina teny an-toerana nanatanteraka ny didy fandravana trano indray ireo tompon’andraikitra, ary raha vao nahare izany ry Ravalomanana sy avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim), avy hatrany dia nanangon’olona izy ireo hanohitra izany fandravana ny trano natsangan-dRavalomanana izany.
Saika hanatanteraka fanakorontanana ireto andian’olona, izay nahitana « Gros Bras », nampiasain’ny Filoha teo aloha sy ny antoko Tim tamin’izany, saingy tsy tanteraka ny fikasan-dratsin’izy ireo. Niatrana avy hatrany mantsy ny mpitandro filaminana, ary nanaparitaka vovoka mandatsa-dranomaso avy hatrany satria efa nanomboka nitoratoraka ireto andian’olona avy amin-dry Ravalomanana sy ny Tim ireto tamin’izany. Voafehin’ny mpitandro filaminana ny savorovoro teny an-toerana.
Raha ny zava-nitranga mantsy, dia nidina teny ifotony ny depiote Tim, Hanitra Razafimanantsoa, ary nifampitafa tamin’ireo andian’olona saika hanao am-boletra ny vavahadin’ilay toerana misy ny orinasa Romanor teo aloha. Niditra tao amin’ilay toerana ity depiote ity sy ireo mpanara-dia azy, ary nitafa tamin’ny mpanao gazety rehefa vita ny fifampiresahan’izy ireo tamin’ny iraky ny vadintany nanatanteraka ny asa amin’ny fandravana ilay trano lazain-dRavalomanana fa azy miaraka amin’ilay tany antsoina hoe “Soa”. Nony nivoaka tao amin’ilay toerana izy ireo, dia nitafa sy nampivorivory ireo andian’olona teo amin’ny sisin’araben’Ankorondrano iny indray. Midika izany fa mitaona ireo andian’olona hanakorontana hatrany ny avy amin-dRavalomanana sy ny antoko Tim.
Hita amin’izany ny barofo sy ny fandikan-dalàna ataon’i Marc Ravalomanana sy ny antoko Tim. Efa hita fa tsy manara-dalàna ny fananganana ilay fotodrafitrasa, mbola tsy manaiky ihany izy ireo fa ny hanao barofo amin’ny fandikan-dalàna, ka mikiry biby ny hanohy ny fananganana hatrany. Dia toa izany hatrany ny ataon’ity Filoha teo aloha ity sy ireo mpanara-dia azy. Tsy manam-piovana fa ny hanakorontana ny fiainam-pirenena hatrany amin’ny alalan’ny fitaoman’olona hiaro ny tombontsoany manokana, sns.